Khasaaraha Ka Dhashay Mudaharaad Looga Soo Horjeedo Sicir-bararka iyo Xirnaanshaha Dekeda Boosaaso.
Wednesday November 01, 2017 - 19:18:36 in Wararka by Super Admin
Mudaharaadyo rabshado wata oo looga soo horjeedo sicir-bararka iyo xirnaanshaha dekedda Boosaaso oo maanta ka dhacay magaaladda ayaa waxaa ka dhashay khasaare nafeed iyo hanti ballaaran oo la bur-buriyay.
Siday ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka ee cusbitaalka Bosaso, laba qof ayaa geeriyooday , waxaana ku dhaawacmay labo qof oo kale oo ka mid ahaa dadkii shacabka ahaa ee mudaharaadayay. Wararku waxay intaas ku darayaan inuu jiro baabuur iyo hanti kale oo ay bur-buriyeen shacab caraysan.
Dad goobjoogayaal ah ayaa sidoo kale u xaqiijiyay Horseed Media in qofka geeriyooday iyo labada qof ee dhaawacu soo gaaray ay ku dhacday rasaas ay soo rideen ciidamada booliiska ee joogay taliska booliiska gobolka bari oo ku yaal bartamaha magaaladda. Mudharaadayaasha ayaa marayay wadada hor-marta taliska Booliiska.
Dadka mudaahraadayada oo u badan ganacsatadii jeeblayaasha ahaa iyo shacabka caaadiga, ayaa dhagaxaan ku xiray wadooyinka waaweyne ee magaaladda, waxaana ay ku dhawaaqayeen erayo ay ka mid tahay waa si deg deg ah loo furaa dekeda Bosaso, dooni meeyno Shirkadda DP World iyo erayo kale oo ay uga soo horjeedaan dhibaatada ka taagan xirnaanshaha dekeda. Dadkan ayaa iskood isu abaabuley, mana jirto cid isugu baaqday in ay dariiqyada isugu soo baxaan.
Mudaaharaadka ayaa saameyn ku yeeshay isu socodka dadka, gaadiidka iyo ganacsiga magalaada.
Dekedda magaaladda Bosaso oo ah isha dakhli ee ugu weyn ee maamulka Puntland, isla markaana ah dekedda ugu mashquulka badan dekedaha Soomaaliya ayaa muddo todobaad ah xirnayd ka dib markii uu khilaaf soo kala dhex galay ganacsatada iyo shirkadda lagu wareejiyay maamulka dekedda Bosaso ee P&O Port oo kor u qaaday khidmadihii laga qaadi jiray gaadiidka badeecaha sida ee ku soo xirta dekedda.